တရုတ်သမုဒ္ဒရာရေကြောင်းသည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ရေကြောင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အပိုပစ္စည်းများနယ်ပယ်တွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ အဏ္ဏဝါလေအေးပေးစက် compressor ၏ရှုထောင့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေကြောင်းလေအေးပေးစက်တွန်းစက်များပြုပြင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုအထူးပြုသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောလေအေးပေးစက် compressor နှင့်အဏ္ဏဝါလေအေးပေးစက် compressor အပိုပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့သည်။
အဏ္ဏဝါလေအေးပေးစက်အမျိုးအစားများအကြောင်းကျနော်တို့စတော့ရှယ်ယာများတွင်အောက်ပါပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့နိုင်သည်ပေးခြင်းရေခဲသေတ္တာ Compressor, အထုပ်အမျိုးအစားယူနစ်အေး, Air ကိုအေးစက်တွန်း & ရေခဲသေတ္တာလေကြောင်းလေမှုတ်စက်စသည်တို့ကိုအဆိုပါတွန်းစစ်မှန်သောအစိတ်အပိုင်းအရည်အသွေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောတန်ဖိုးရှိများမှာ!
SINO-OCEAN MARINE သည်လေအေးပေးစက် / ရေခဲသေတ္တာအပြည့်အဝနှင့်အပိုပစ္စည်းများ - ချုံ့မော်တာ၊ ပစ္စတင်၊ ပစ္စတင်လက်စွပ်၊ bearing bush၊ ရေနံစုပ်စက်၊ terminal board၊ အီလက်ထရောနစ် module၊
အဏ္ဏဝါလေအေးပေးစက်တွန်းပြီးပါကအောက်ပါစက်ပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ စစ်မှန်သောအစိတ်အပိုင်းများအရည်အသွေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပါသောလေအေးပေးစက် compressor သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရလောက်ပါသည်။
S / N ကို
MCU-SH 6J 2Y ။ CK271954
MAX လုပ်ငန်း PRES.:24 BAR ရေခဲသေတ္တာ: R404A ယိုစိမ် PRES.:8 BAR နှစ်: 2010
YORK အမျိုးအစား: 6J-33.2Y-40D နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (M3 / H): 95.3 (50HZ) / 115 (60HZ) SPEED (RPM): 1450 (50HZ) / 1750 (60HZ) LP / HP (MAX): ၁၉/၂၈ BAR
R407 435M3/ H ကို Ps / PD: 25 / 25.5 ဘား (င) N ကိုအများဆုံး: 1500 RPM နှစ် - ၂၀၁၂
440V 60HZ N ကိုမိနစ်= 700RPM Vmin: 73.5M3/ HNMAX: 1800R Vmax: 188.9m3 / ဇ
DPH: 35 DPL: 20 SPL: 60 APL: 20 R ကို-22 2P 3PH 180-230V / 200-250V 50 / 60HZ
MODEL NO: CARLYLE.06DR 241ACC19C0 Serial NO.1197MD1335 MOTOR: 06DD 223 914 230V 3PH 50HZ LRA.154 SYN RPM.1800 460V 3PH 50HZ LRA.77 SYN RPM.1800 HS DESIGN (PSI / KPA) LS 245/1691 HS စမ်းသပ်ခြင်း ( PSI / KPA) LS 480/3317
1800RPM， R12 / R22 DP / AP H: 28 / 28kg / cm2 L: 15 / 15kg / cm2 TP H: 42kg / cm2 L: 23kg / cm2 1992
460V 380-420V, 60 / 50Hz, 10A, HP / LP BARS: ၂၈.၈ / ၂၁၊ ၃၅၀၀/၂၉၀၀ RPM၊ အိုင်ပီ - ၂၁၊ ၁၃.၇၅ / ၁၁.၄ M3 / H
နှစ်: 2009 RGFR: R22 SPEED: 175M: 1800RPM VOLUME သုတ်သင်3/ H ALLOWABLE ဖိအား MAX: LP.21bar ဂရမ် HP.28 / bar
ရေခဲသေတ္တာ: R22 YEAR: 96 SPEED: 1750RPM SWEPT VOLUME: 114M3 / H အလုပ်လုပ်တဲ့ဖိအား: 22BAR
SPEED: 700-1750RPM 19 / 25bar
အစားထိုး: 19,0-47,4M3 / H ကို
မြန်နှုန်း: 700-1750RPM LP / HP က max.19 / 25bar
380-415 / 440-460V 3PH 50 / 60HZ ဝင်ရိုးစွန်း:4R22 LRA: 44-48 / 46-48 AP (H) 2.8MPA (L) 1.4MPA TP (H) 4.6MPA (L) 2.1MPA DP (H) 2.8MPA (L) 1.4MPA
380-415 / 440-460V 3PH 50 / 60HZ ဝင်ရိုးစွန်း:4R22 LRA: 44-48 / 46-48 AP (H) 2.8MPA (L) 1.4MPA TP (H) 4.6MPA (L) 2.1MPA DP (H ကို ) 2.8MPA (L) 1.4MPA
380-415 / 440-460V 3PH 50 / 60HZ POLE:4ရေခဲသေတ္တာ: R22 LRA: 35-38 / 36-37 AP (H) 2.8MPA (L) 1.4MPA TP (H) 4.6MPA (L) 2.1MPA DP ( H ကို) 2.8MPA (L) 1.4MPA
ပါဝါထောက်ပံ့မှုအဓိက: 440V 60HZ ပါဝါထောက်ပံ့ရေး Sub: 110V 60HZ MOTOR: 3φ 4P 30KW အလေးချိန်: 305KG ဆီ: 6.0L
MAX.REVOLUTION: 1800RPM R22 REF.OIL: JIS CLASS.1 VG56 L.15 / 15KG / M2 TP: H.42KG / M က2 L.23KG / M2
MAX.REVOLUTION 1800RPM， R404A REF.OIL DAPHNE FVC68D 2000.06
1800R R22 REF.OIL: JIS ဘီ CLASS.1 VG56 DP / AP: H2.8 / 2.8MPA L ကို 1.5 / 1.5MPA TP: H ကို 4.2 မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင် L ကို 2.3MPA
50 / 60HZ, R22 REF.OIL: SUNISO 4GSDID-K သည် 1998-01 DP / AP H ကို: 2.8 / 2.8MPA L ကို: 1.5 / 1.5MPA TP H ကို: 4.2MPA L ကို: 2.3MPA
3PHASE: 200 ~ 220V 50 / 60HZ ရေခဲသေတ္တာ: DF22 REF.OIL: SUNISO 4GS
အရင်းအမြစ်: AC 3φ 380V 50HZ / 440V 60HZ နေရာရွှေ့ပြောင်းမှု - 159 / 188M3 / H ပါဝါ - 30KW အလေးချိန် - 495KG နေ့စွဲ: 2012.3
သု။ Ref ။ comp ။ စတား
MAX OPERATION PRES.:24 BAR R404A - PRES တွင်ပေါက်ဖွားသည်။
YORK အမျိုးအစား: SBO 42Y နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်း (M3 / H): ၂၂.၇ - ၅၆.၈ မြန်နှုန်း - ၇၀၀-၁၇၅၀R LP / HP (MAX): ၁၉/၂၅ BAR
အမျိုးအစား / အရွယ်အစား QPP MODEL 53537 ရေခဲသေတ္တာ R404A အမိန့်အမှတ် 1B1229 နံပါတ်စဉ် SQPP0195 PS5/ 30bar PT 7.5 / 45bar TS -10 + 95 95
မရိန်းလေတပ် Condirion Systerm
ဒေါင်မော်ဒယ်: H3500CC / NOV R404A Ph：3380-420V 50HZ FLA: 60 LRA: 260 440-480V 60HZ FLA: 60 LRA: 260 1450/1750 OIL.POE46-KG 4
CONDENSER: ALFA LAVAL MODEL: CDEW / S 190T NV TUBES: FLUID: WATER PS: 10BAR PT: 15BAR TS: -10 + 120 ℃ Volume: 14.2L SHELL: FLUID: HFC-HCFC PS: 30BAR PT: 45BAR TS: -10 + 120 ℃အသံအတိုးအကျယ်: 23.7L
လေမှုတ်စက်ကိုထိန်းပါ သတ်မှတ်ထားသောစွမ်းရည် - Capacidad normal50 SCFM @ 100 85m / h @ 6.9BAR & 35 @
လေမှုတ်စက်ကိုထိန်းပါ 2124 ni / မိနစ်ဖိအား max ကို: 14 bar.g မက်ဝင်ပေါက်Temp.:70℃ 0.5KW, 220V / 1ph / 60Hz, R134a
FA-2LSMY2, FA-2LSY, FA-2LSYM1, FA-2LSYM2, FA-2MSYM1, MR-4LS, MR-6MS, MR-6SS, RS2514ESH1, RS2514EYH1, RS2514PSH17, RS2514PSH17A, RS2526PSH14 နှင့်စသည်တို့ကို။
HC52 စီးရီး, HC58 စီးရီး, HC55 စီးရီး, HC75 စီးရီးဒါပေါ်မှာ။
ဒါကြောင့် 2T.2Y, VY, 2N.2Y, 4T.2Y, 6F.2Y နှင့်။
ဒါကြောင့် 3CI-1000-TFD-203, 3DST-075E-TFD-806, 3DK8-750-TFD-253, ZB29KQE-TFD-558 စသည်။
5H စီးရီး, 5F စီးရီးဒါပေါ်မှာ။
CMO စီးရီး၊ PKO စီးရီး၊ SMC65 စီးရီး၊ BFO စီးရီး၊ SBO စီးရီးစသည်။
CARLYLE အတွက်သင့်တော်သည် -
ဒီတော့အပေါ် 06DR စီးရီး, 06E စီးရီးနှင့်။
အထက်ပါမော်ဒယ်များအပြင်, ငါသညျလညျးဒါအပေါ် BOCK, GRASSO, HI AIR, Toyo, York, Kyung နှင့်များအတွက်သင့်လျော်သောအားလပ်ချိန်မှာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ ပန်းကန် heat exchanger
Rotor, လက်စွပ်ဆက်ထိန်းထား, အခွံမာ,